Daryeelka waayeelka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Daryeel iyo caafimaad / Daryeelka waayeelka
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 1 7 2019
Marka qof noqdo waayeel waxaa badanaaba u baahdaa caawimaada waxyaabaha gacanta laga qaabto maalin walba. Gudaha Iswiidhan waxaa dadka waayeelka ah ee u baahan taageero iyo caawimaad sida ku cad sharciga ay xaq u leeyihiin inay tani ka helaan bulshada.
Waxa daryeelka dadka waayeelka ahi uu caawimaad ka gaysan karo way ku kala duwanyihiin waxayna ku xirantahay kolba degmada aad adigu degantahay.
Daryeelka dadka waayeelka ahi wuxuu caawimaad ka gaysan karaa gudaha guriga iyo noocyada kala duwan ee hoyga dadka waayeelka ah.
Akhri dheeraad ku saabsan daryeelka dadka waayeelka ah iyo qaababka guriga ee kala duwan kuna qoran bogaga intarnatka ee In lagu gaboobo Iswiidhan.
Akhri dheeraad ku saabsan daryeelka dadka waayeelka ah kuna qoran bogaga intarnatka ee Hagida Daryeelka 1177.
In la dhinto waxaa xitaa lagu magacaabaa in la geeriyoodo. Marka qof waayeel ah oo ehel ahi ku geeriyoodo guriga waa in lala xiriiraa shaqaalaha daryeelka bukaanka. Mararka qaarkood waxay soo qaadaan maydka una qaadaan isbitaal halkaas oo dhakhtar mas'uul ka yahay xaqiijinta dhimashada. Haddii qofku leeyahay rabitaano gaar ah, tusaale ahaan ku salaysan nidaamyo diineed, waa in arintan lagala hadlaa shaqaalaha daryeelka.
Tilmaamaha ehelka qofka geeriyooday
In la waayo qof ehel ah oo kuu dhow waxay ahaan kartaa xaalad adag oo waxaad u baahan kartaa caawimaad iyo taageero si aad u maarayso murugadan iyo arrimaha waxa la qabanayo. Tilmaamaha ehelka qofka geeriyoooday waa bog intarnat oo madax-banaan kaas oo lagu ururiyay waxa ugu muhiimsan ee adigu aad u baahantahay inaad ogaato marka qof kuu dhow dhinto.
Tilmaamaha ehelka qofka geeriyooday waxaad ka helaysaa waxyaabo ay ka mid yihiin liistada hubinta looguna talogalay waxa loo baahanyahay inay dhacaan ka dib xaalad dhimasho.
Akhri dheeraad ku saabsan sida aasku uga dhaco gudaha Iswiidhan kuna qoran bogga Marka qof dhinto.
Taageerada ehelka qofka geeriyooday
Xaalada dhaqaale way is badashaa haddii aad dhaqaalaha si wada-jir ah ula lahayd qof ehel ah oo geeriyooday. Adigu waxaad u baahan kartaa inaad qorshayso oo samayso miisaaniyada dhaqaalahaaga. Laakiin waxaa kale oo jira taageero dhaqaale oo aad heli karto marka qof ehel ah oo kuuu dhow dhinto.
Lacagta hawl-gabka ee ehelka qofka geeriyooday waa taageero dhaqaale oo la bixin karo haddii qofku lahaa qof qaraabo u dhow oo geeriyooday. Lacagta hawl-gabka ee ehelka qofka geeriyooday waxaa laga fikiray inay daboosho qayb ka mid ah masruufidii qofkii geriyooday caawimaad ka gaysan jiray.
Qofka dhaxlaya haddii ay jiraan lacago iyo hantiyo kale oo uu ka tagay qofka geeriyooday waxaa ay tani ku nidaamsantahay sharciga Iswiidhan ee lagu magacaabo xaqa dhaxalka.
Akhri dheeraad ku saabsan xaqa dhaxalka.